छन्द बचाऊ अभियानको पाँचौं कक्षा सम्पन्न – Sikkim Journal
छन्द बचाऊ अभियानको पाँचौं कक्षा सम्पन्न
गान्तोक, 13 जून। विश्व साहित्य नेपाली महासंघ ( भारत ) शाखाको तत्त्वावधानमा सञ्चालन हुँदै आएको छन्द बचाऊ अभियानको पाँचौ कक्षा हिजो 12 जूनको दिन समापन भयो। समारोह भारत शाखाका अध्यक्ष राहुल राई ” बोगिको ” (मणिपुर)को अध्यक्षता अनि डा. जीवन राणा भाषा परामर्श समिति नेपाली साहित्य अकादेमी नयाँ दिल्लीको मुख्य आतिथ्यमा सम्पन्न भएको हो। यस अवसरमा विश्व नेपाली साहित्य महासंघ केन्द्रिय अध्यक्ष सुरेन्द्र लिम्बू “परदेशी” साथै विनेसाम भारत शाखाका सरंक्षक द्वय परिष्ठ समालोचक सुकराज दियाली अनि शरद छेत्री, मणिपुरका कुलपति गंगा प्रसाईंको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम भर्चुल माध्यमबाट भव्यताका पूर्वक समापन भयो।
यस अवसरमा छन्द कक्षा अनि यसको मूल उद्देश्य बारे विश्व नेपाली साहित्य महासंघ भारत शाखाकी सचिव श्रीती सुमित्रा अविरलले आज संचालित कक्षामाथि आफ्नो विचार राखेकी थिइन्। कार्यक्रममा छन्द सिकेर रचना वाचन गर्ने कविहरूले पनि भाग लिए। आफ्नो संम्बोधनमा मुख्य अतिथि डा. जीवन राणाले लुप्तप्रायः छन्द विधामाथि यसरी काम गरेको र यसबाट मानिसहरूले उठाएको लाभ देख्दा छन्दको उन्नति हुने रहेछ भन्ने स्पष्ट रहेको बताए। उनले छन्दमा वाचन गरिएका कविताहरूको पनि प्रशंसा गरे।
कार्यक्रममा विनेसाम भारत शाखाका अध्यक्ष राहुल राई ” बोगिको “ले पनि आफ्ना कुरा राखेका थिए। उनले आफ्नो सम्बोधनमा छन्दको गरिमालाई भारतमा पनि फैलाएर लाने साथै यसमा धेरै काम गरिनुपर्ने कुरा राखे। यस अवसरमा छन्द गुरु मोहन गौतमले स्वागत सम्बोधन र धन्यवाद ज्ञापन राखेका थिए। कार्यक्रमको सञ्चालन छन्द गुरु गोपाल ढकालले गरेका थिए।